Download Google Play Services APK | Gam akporosis
Gịnị bụ ọrụ Google? Ha dị ha mkpa? Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anaghị m etinye ha? Enwere ọtụtụ obi abụọ gburugburu ọrụ Google ma ọ bụ Ọrụ Google. Anyị nwedịrị ike ịchọ tinyegharịa ọrụ Google Play. Nnwere onwe dị mma nke gam akporo na-enye anyị nwere ike ịbụ mma agha ihu abụọ maka ndị ọrụ na-enweghị uche yana, ọ bụ ezie na ọ nwere ike iju gị anya, enwere ọnọdụ nke ndị ọrụ a na-ewepụ ọrụ google. N'isiokwu a, anyị ga-anwa idozi obi abụọ gị niile, yana anyị ga-etinye njikọ nbudata na .apk nke ụdị ndị kachasị ọhụrụ.
1 Gịnị bụ ọrụ Google Play
2 Etu esi ebudata APK site na ọrụ Google Play
3 Ebee ka m ga-ebudata APK nke ọrụ Google Play maka mbadamba?
4 Etu esi wụnye APK nke ọrụ Google Play
5 Etu esi emelite ọrụ Google Play
Gịnị bụ ọrụ Google Play
Ọrụ Google ma ọ bụ Google Play Services Ọ bụ ngwa dị mkpa maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị nke ngwa gam akporo. Dịka ngwa dị mkpa nke sistemụ ahụ, ọ dị mkpa ka emelitere ụfọdụ ngwa ngwa ala, maka nyocha nke ọrụ Google, maka ịmekọrịta kọntaktị na ọ na-enye anyị ohere ịnweta ntọala nzuzo kachasị ọhụrụ. N'aka nke ọzọ, ọ na-enyekwa ohere ịrụ ọrụ ụfọdụ ọrụ dabere na ọnọdụ anyị, na-ekpebi ma anyị ga-enye nkenke ka ukwuu, belata oriri batrị ma ọ bụ bulie ma melite ahụmịhe egwuregwu, n'etiti ihe ndị ọzọ.
Etu esi ebudata APK site na ọrụ Google Play
Bestzọ kachasị mma bụ ime a Google Play nyocha ma wụnye ngwa «Google Play Services». Ọ bụrụ n'ịchọrọ ka ọ dịkwuo mfe, ịnwere ngwa dị site na njikọ ndị a:
Ọrụ Google Play
Nsogbu bụ na enwere ọtụtụ ndị ọrụ na-enweghị ike ịchọta ngwa ahụ na ụlọ ahịa gọọmentị Google. Agbanyeghị na ekwesighi ka ọ dị otu a, kpọm kwem n'ihi na anyị enweghị ngwa anyị chọrọ iji wụnye ihe nwere ike ịbụ ihe ọjọọ na ọ bụ ya mere na ọ pụtaghị na nsonaazụ, ya mere, anyị ga-eche ihu azụ na-ata ọdụ ya
Maka ndị niile na-ahụghị ngwa ahụ ma chọọ ịwụnye ọrụ Google, nzukọ xda-mmepe nwere Otu peeji ebe anakọtara nsụgharị ndị ọhụrụ. Have nwere njikọ ndị a n'okpuru:
Maka gam akporo 6.0+:
Ọrụ Google Play 8.7.02 (2624717-430) - 46 MB - Universal armeabi-v7a CPU
Ọrụ Google Play 8.7.02 (2624717-434) - 42 MB - 240 DPI & armeabi-v7a CPU
Ọrụ Google Play 8.7.02 (2624717-446) - 45 MB - 320 DPI & ogwe aka 64-v8a CPU
Maka gam akporo 5.0+:
Ọrụ Google Play 8.4.89 (2428711-230) - 46 MB - eluigwe na ala armeabi-v7a CPU
Ọrụ Google Play 8.4.89 (2428711-234) - 41 MB - 240 DPI & armeabi-v7a CPU
Ọrụ Google Play 8.4.89 (2428711-236) - 41 MB - 320 DPI & armeabi-v7a CPU
Ọrụ Google Play 8.4.89 (2428711-238) - 42 MB - 480 DPI & armeabi-v7a CPU
Ọrụ Google Play 8.4.89 (2428711-240) - 48 MB - eluigwe na ala arm64-v8a CPU
Ọrụ Google Play 8.4.89 (2428711-246) - 44 MB - 320 DPI & ogwe aka 64-v8a CPU
Ọrụ Google Play 8.4.89 (2428711-248) - 44 MB - 480 DPI & ogwe aka 64-v8a CPU
Ọrụ Google Play 8.4.89 (2428711-270) - 47 MB - eluigwe na ala x86 CPU
Ikwesiri iburu n’uche nke ahụ download njikọ adịghị adabere na anyị. Willfọdụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ, mana ọ ga-abụ na a ga-edochi ha mgbe ụbọchị ole na ole gachara.
Ebee ka m ga-ebudata APK nke ọrụ Google Play maka mbadamba?
Peeji bu nke mbu enwere nsụgharị maka smartphone, mbadamba na ọbụna PC (nke nwere ike ịbụ otu nke na-eji Remix OS) si gam akporo 5.0 gaa na ụdị kachasị ọhụrụ. Naanị ị ga-ahọrọ nke ga-adịrị anyị mma. N'ezie, mgbe ịlele na ọ pụtaghị na Google Play.
Etu esi wụnye APK nke ọrụ Google Play
Nke a bụ ajụjụ ị jụkwara anyị, mana nke ahụ nwere azịza dị mfe: Android adịghị ka iOS ma ọ bụ Windows Phone. Ọ bụ ezie na .apk nke ọrụ Google nwere ike ịbụ sọftụwia dị oke mkpa maka sistemụ ahụ, ntinye ya adighi iche na ndi ozo.apk na anyị hụrụ na ịntanetị. Nke ahụ bụ, faịlụ ọ bụla anyị na-ebudata na ihe nchọgharị weebụ ọ bụla ga-apụta na ngalaba ngosi. Ozugbo nbudata ihe nbudata, anyị ga-enweta ọkwa ma metụ ebudatara .apk iji wụnye ya na sistemụ ahụ.
Ee, anyị nwere ike iburu ihe abụọ n'uche: nke mbụ na ikekwe nke kachasị mkpa bụ ka anyị rụọ ọrụ nhọrọ nke ga-enyere anyị aka ịwụnye. ngwanrọ sitere na isi mmalite. Nke abụọ bụ na anyị nwere ike wepu nke a na ihe ọ bụla ọzọ .apk ozugbo anyị rụnyere ya.
Etu esi emelite ọrụ Google Play
Ajuju a nwekwara azịza dị mfe, mana m ghọtara obi abụọ: dịka ngwa ọ bụ, a na-emelite ya dịka ngwa ndị ọzọ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị arụ ọrụ mmelite akpaka, ọrụ Google ma ọ bụ Ọrụ Google ga-emelite na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na ọ bụghị, anyị ga-abanye Google Play ịchọpụta na e nwere a ọhụrụ version na update.
Ajuju ziri ezi ma ọ bụ ajụjụ maka ọtụtụ ndị ọrụ ga - abụ "gịnị kpatara na ọrụ Google anaghị emelite na ngwaọrụ m?" Azịza ya dịkwa mfe, mana ọ nwere ike ọ gaghị abụ ozi ọma: ngwaọrụ niile na-arụ ọrụ na ngwanrọ nwere ndụ. Mgbe oge ahụ gasị, agbanyeghị ụdị akara ahụ, akụrụngwa anyị agaghịzi adị ma ọ nweghị nkwado ọzọ. Nke a pụtara na nrụzi ga-adị oke ọnụ (ma ọ bụrụ na e mezigharị ya) na anyị ga - enwe ike ịwụnye sọftụwia ọhụrụ pere mpe. Nke a bụ ihe nwere ike ime anyị ma ọ bụrụ na anyị enweghị ike imelite ọrụ Google: ọ bụghị na anyị na-akwụsị ime ma ọ bụ ime ihe na-ezighi ezi, kama ọ bụ na ngwaọrụ anyị enweghị ike imelite ụdị gam akporo ya na ụdị nke anyị na-eji. enweghị ike ịwụnye ụdị kachasị ọhụrụ nke ọrụ Google.
Echere m na ọ bụrụ na ịmara otu esi etinye ya ROM site n'aka ndị ọzọ Will gaghị achọ ozi a, mana oge ụfọdụ azịza ya bụ ịwụnye ROM nke na-enye anyị ohere iji ụdị gam akporo emelitere nke nwere ike ịgụnye ụdị ọrụ Google nke oge a. Lee ihe na-adọrọ mmasị ga-abụ ịhapụ ngwaọrụ gị nye onye na-achịkwa karịa ma wụnye ụfọdụ ROM, dị ka Cyanogen.
Enwere m olileanya na m nyeere gị aka yana ị nwee ike ịwụnye ọrụ Google na ngwaọrụ gam akporo gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » APK » [APK] Download Google Play Services maka ngwaọrụ gam akporo ọ bụla
Kedu ihe bụ ihe a
Zaghachi ka edelin Medina
ị bụ onye amamihe
Zaghachi Alejandro Paredes Vidal
Maka ịgbanye ekwentị m enwekwaghị m Ọrụ Google mana ozi a nyeere m aka nke ukwuu
Maka ịmegharị ekwentị m na imezi nsụgharị android na 5.0.2, ewepụrụ ọrụ google niile na enweghị m ike ịtinye ya, enwere m galaxy s3 .. Enyemaka 🙁
Ọ bụrụ na m hichapụ ọrụ google na ọrụ goo na ugbu a enweghị m ike ịwụnye ọrụ ndị ahụ
Na android m, google play gwara m ka m nyochaa akaụntụ ahụ mana aghọtaghị m nke ọma, m gbalịrị mana ọ naghị arụ ọrụ wee m na-ehichapụ ọrụ google play na mberede. Mgbe m nwara ibudata nke a na ngwa ndị ọzọ ọ jụrụ m maka nyocha na-edugaghị ebe ọ bụla, m gbalịrị ịntanetị mana enwere m njehie. Ekwentị m bụ Samsung Galaxi Ace Plus version GT-7500L android: 2.3.6 na ebe ọ bụ ochie, enweghị m ike ị nweta azịza doro anya, ọtụtụ ngwa m agwụla, ọgbakọ a emeela ochie mana enwere m ike idozi ya.
Enwere m olileanya na nkwanye. Daalụ
Zaghachi DaCa ♡
Enwerem samsung galaxy ace s5 ma amaghi m ihe mere na enweghi m egwuri egwu ma m nwaa iwunye ya mana enweghi m ike ma m nweghi ike imelite ya, achọrọ m ibudata shark ayidAaaaaaaaaa
Zaghachi juan miguel
Enwere m LG L50 ma enweghị m ike imeghe ụlọ ahịa Google play, xk mgbe m gbalịrị imepe akaụntụ m maka ịkpọ ya ọ wụpụ na com.google.process.gapps e wetara ma ọ bụ Google Play Store Service .. Alwien qm enyemaka ..
Zaghachi Veronica ML
Ndewo, enweghị m ike imelite ọrụ google, enwere m ike iji gmail na google mana anaghị egwu egwu na tube, enwere m LG7
Zaghachi Vanina Rosato
Etu esi wunye ọrụ google play ọzọ na android 5.1 chinese
Pink pink dijo
Enweghi m ike ịwụnye ihe ọ bụla, ana m enweta njehie na ngwugwu na ibe anyị adịghị
Zaghachi Rosa cedeno